Enina fiasan'ny fiangonana - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Ny fiangonana > Fonctiona enina amin'ny fiangonana
Fa maninona no mivory isan-kerinandro isika mba hivavaka sy hianarana? Moa ve isika tsy afaka mivavaka, mamaky Baiboly ary hihaino toriteny amin'ny radio izay tsy dia miezaka mafy loatra ao an-trano?
Tamin'ny taonjato voalohany dia nivory isan-kerinandro ny olona mba hihaino ny Soratra Masina - fa anio kosa dia afaka mamaky ny baibolinay manokana isika. Maninona moa raha mijanona ao an-trano ianao ary mamaky Baiboly irery? Mety ho mora kokoa izany - ary mora kokoa ihany koa. Miaraka amin'ny teknolojia maoderina, afaka mihaino ny mpitory mahay indrindra eran-tany isan-kerinandro ny olon-drehetra eto ambonin'ny tany! Na mety manana safidy hisafidy na mihaino ny toriteny izay miahy antsika na lohahevitra tiantsika fotsiny isika. Tsy mahafinaritra ve izany?
Eny, tsia. Mino aho fa ny Kristiana izay mijanona ao an-trano dia tsy mahita ireo lafin-javatra manan-danja ao amin'ny Fiangonana. Manantena aho fa hiresaka an'ity ato amin'ity lahatsoratra ity, mba hampirisihana ireo mpitsidika mahatoky handray bebe kokoa amin'ny fivoriantsika ary handrisika ny hafa hanatrika serivisy isan-kerinandro. Mba hahatakarana ny antony hihaonantsika isan-kerinandro, dia manampy ny manontany tena hoe "Fa maninona Andriamanitra no namorona ny Fiangonana?" Inona no tanjony? Rehefa mianatra ny asan'ny Fiangonana isika dia afaka mahita ny fomba fivorian'ny fivoriana isan-kerinandro amin'ny tanjona isan-karazany mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanany.
Hitanareo, ny didin'Andriamanitra dia tsy mitsambikina fotsiny mba hahitana raha mitsambikina isika rehefa miteny hoe mitsambikina. Tsia, fa mahasoa antsika ny didiny. Mazava ho azy fa rehefa Kristianina tanora isika dia mety tsy ho takatsika hoe nahoana Izy no mandidy zavatra sasany ary tsy maintsy mankatò na dia tsy azontsika rehetra aza ny antony. Matoky an’Andriamanitra fotsiny isika fa mahalala ny tsara indrindra Izy ary manao izay lazainy. Noho izany, ny tanora kristiana iray dia mety handeha any am-piangonana fotsiny satria ny kristiana dia antenaina hanao izany. Mety hanatrika an’ilay fotoam-pivavahana ny tanora kristiana iray, satria fotsiny amin’ny teny hebreo 10,25 Hoy izy: "Aza miala amin'ny fivoriantsika ..." Hatreto, tsara. Rehefa mihamatotra amin’ny finoana anefa isika, dia tokony ho tonga amin’ny fahatakarana lalindalina kokoa ny antony andidian’Andriamanitra ny vahoakany hivory.
Eo am-pandinihana an’io foto-kevitra io, dia aoka isika hanomboka amin’ny filazana fa tsy ny Hebreo ihany no boky mandidy ny Kristianina hivory. “Mifankatiava” hoy i Jesosy tamin’ny mpianany (Jaona 13,34). Rehefa miteny i Jesosy hoe “mifampiresaka”, dia tsy ny adidintsika ny mitia ny olona rehetra no tian’i Jesosy holazaina. Raha ny tokony ho izy, dia manondro ny ilana ny hitiavan’ny mpianatra ny mpianatra hafa – tsy maintsy fifankatiavana izany. Ary izany fitiavana izany dia mariky ny mpianatr’i Jesosy (and 35).
Ny fifankatiavana dia tsy aseho amin'ny fihaonana kisendrasendra any amin'ny mpivarotra enta-madinika sy amin'ny hetsika ara-panatanjahantena. Ny didin’i Jesosy dia mitaky ny hivory tsy tapaka ny mpianany. Tokony hifandray tsy tapaka amin’ny Kristianina hafa ny Kristianina. “Aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, fa indrindra amin’izay miombona amin’ny finoana” hoy ny nosoratan’i Paoly (Galatiana 6,10). Mba hankatoavana io didy io, dia ilaina ny mahafantatra hoe iza ny mpiray finoana amintsika. Tsy maintsy mahita azy ireo isika ary tsy maintsy mahita ny filany.
“Manompoa ny namany”, hoy i Paoly nanoratra ho an’ny Fiangonana tany Galatia (Galatiana 5,13). Na dia tokony hanompo ny tsy mpino amin’ny fomba sasany aza isika, dia tsy nampiasa io andininy io i Paoly mba hilazana izany amintsika. Ao amin’io andininy io, dia tsy mandidy antsika hanompo an’izao tontolo izao izy, ary tsy mandidy izao tontolo izao hanompo antsika. Izy kosa dia mandidy ny fiaraha-miasa eo amin’ireo izay manaraka an’i Kristy. “Mifampitondrà izay mahavesatra, ary tandremo ny lalàn’i Kristy” (Galatiana 6,2). Niresaka tamin’ny olona te hankatò an’i Jesosy Kristy i Paoly, dia nilaza tamin’izy ireo ny andraikitra ananany amin’ny mpino hafa. Ahoana anefa no ahafahantsika mifanampy hitondra ny enta-mavesatra raha tsy fantatsika hoe inona ireo enta-mavesatra ireo - ary ahoana no ahafantarantsika izany, raha tsy mihaona tsy tapaka.
“Fa raha mandeha eo amin’ny mazava isika ... dia manana firaisana amin’ny namany avy”, hoy ny nosoratan’i Johannes (1. Johannes 1,7). Miresaka momba ny olona mandeha amin’ny mazava i Jaona. Fiombonana ara-panahy no resahiny, fa tsy fihaonana amin’ny tsy mpino. Rehefa mandeha ao amin’ny mazava isika dia mitady mpino hafa hiarahana aminy. Nanoratra toy izao koa i Paoly: “Mifankatiava ianareo.” ( Romana 15,7). “Aoka ianareo ho tsara fanahy sy hifampiantra ary hifamela heloka.” (Efesiana 4,35). Manana andraikitra manokana ny Kristianina.
Manerana ny Testamenta Vaovao dia mamaky isika fa nivory ny Kristianina voalohany mba hiara-mivavaka, hiara-mianatra, hifampizara ny fiainany (ohatra ao amin’ny Asan’ny Apostoly). 2,41-47). Na taiza na taiza nalehan’i Paoly, dia nanangana fiangonana izy fa tsy namela mpino niparitaka. Naniry mafy hizara ny finoany sy ny zotom-pony izy ireo. Modely ara-baiboly izany.
Fa ankehitriny ny olona dia mitaraina fa tsy mandray na inona na inona amin'ny toriteny mihitsy. Mety ho marina izany, saingy tsy fialan-tsiny ny tsy fanatrehana fivoriana. Ny olona toy izany dia mila manova ny fomba fijeriny, manomboka amin'ny "mandray" ka hatramin'ny "manome". Tsy mandeha amin'ny fotoam-pivavahana any am-piangonana fotsiny isika fa mila manome ihany koa - mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra ary manompo mpikambana hafa ao amin'ny fiarahamonina.
Ahoana no ahafahantsika manompo any am-piangonana? Amin'ny fampianarana ny ankizy, manampy amin'ny fanadiovana ny trano, mihira hira ary milalao mozika manokana, mametraka seza, miarahaba ny olona, ​​sns .. Mamorona rivo-piainana iray izay ahafahan'ny hafa maka zavatra avy amin'ny toriteny. Isika dia manana fiarahana sy zavatra ilaina hivavahantsika ary zavatra azontsika atao hanampiana ny hafa mandritra ny herinandro. Raha tsy mahazo na inona na inona avy amin'ireo toriteny ianao dia aza mandray anjara amin'ny serivisy omena ny hafa.
Nanoratra toy izao i Paoly: “Koa mifampahereza ... ka mifampahery.” (2. Thessalonians 4,18). “Aoka isika hifampahery ho tia sy hanao asa tsara.” (Hebreo 10,24). Izany no antony marim-pototra omena ao amin’ny teny manodidina ny didy momba ny fivoriana tsy tapaka ao amin’ny Hebreo 10,25 nomena. Tokony hampirisika ny hafa isika mba ho loharanon’ny teny tsara, na inona na inona marina, na inona na inona mahatehotia ary manana laza tsara.
Makà ohatra i Jesosy. Nitsidika tsy tapaka ny synagoga izy ary nihaino matetika ny famakiana andinin-tsoratra masina izay tsy nisy nanampy azy hahatakatra, fa mbola nandeha nivavaka ihany izy. Angamba nandreraka ny lehilahy nahita fianarana toa an'i Paul, saingy tsy nahasakana azy izany.
Adidy sy faniriana
Ny olona mino fa namonjy azy ireo tamin'ny fahafatesana mandrakizay i Jesoa dia tokony ho faly amin'ny fihetseham-po amin'izany. Manantena ny hihaona amin'ny hafa izy ireo hidera ny Mpamonjiny. Mazava ho azy, indraindray manana andro ratsy isika ary tsy te handeha any am-piangonana. Fa na tsy izany aza raha ny tena tiantsika amin'izao fotoana izao dia mbola adidintsika ihany. Tsy afaka ny handia ny fiainana fotsiny isika ary hanao izay tiantsika fotsiny - tsy raha manaraka an'i Jesosy ho Tompontsika isika. Tsy niezaka nanao ny sitrapony izy fa ny raim-pianakaviana ihany. Indraindray eo no niafarantsika. Raha tsy mahomby ny zavatra rehetra, araka ny voalaza taloha, vakio ny torolàlana fampiasa. Ary ny toromarika dia lazainay mba hanatrika eo amin'ny serivisy.
Fa nahoana? Inona ny atao hoe fiangonana? Manana andraikitra maro ny fiangonana. Izy ireo dia azo zaraina ho sokajy telo - miakatra, anatiny sy ivelany. Ity drafi-pandaminana ity, toy ny drafitra rehetra, samy manana ny tombony sy ny fetra. Tsotra sy tsotra izany.
Saingy tsy mampiseho ny zava-misy fa ny fifandraisantsika ambony dia samy manokana ary manokana ho an'ny daholobe. Manafina ny resaka fa tsy mitovy ny fifandraisanay ao am-piangonana amin'ny olon-drehetra ao am-piangonana. Tsy mampiseho izany fa ny serivisy dia atao ao anatiny na ivelany, na ao anaty fiangonana na avy any ivelany na ho an'ny vondron'olona ary manodidina.
Mba hampisongadina ny lafin-javatra fanampiny amin'ny asan'ny Fiangonana dia nampiasa lamina efatra na dimy heny ny kristiana sasany. Hampiasa sokajy enina ho an'ity lahatsoratra ity aho.
Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia samy irery sy ampahibemaso, ary samy mila azy isika. Andao atombohy amin'ny fifandraisantsika imasom-bahoaka miaraka amin'Andriamanitra - amin'ny fanompoana. Mazava ho azy fa azo atao ny mivavaka amin'Andriamanitra rehefa irery isika rehetra, fa amin'ny ankamaroan'ny fotoana ny teny hoe fanompoana dia manondro zavatra ataontsika imasom-bahoaka. Ny teny anglisy hoe worship dia mifandray amin'ny teny hoe mendrika. Manamafy ny fahamendrehan'Andriamanitra isika rehefa manompo azy.
Io fanamafisana ny hasarobidiny io dia ambara manokana amin’ny vavaka ataontsika ary ampahibemaso amin’ny teny sy ny hira fiderana. In 1. Petrus 2,9 milaza fa antsoina hitory ny fiderana an’Andriamanitra isika. Manoro hevitra ampahibemaso izany. Na ny Testamenta Taloha na ny Testamenta Vaovao dia samy mampiseho ny fomba ivavahan’ny vahoakan’Andriamanitra amin’ny maha-fiangonana azy.
Ny modely ara-Baiboly ao amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao dia mampiseho fa matetika ny hira dia ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Ny hira dia maneho ny sasany amin'ireo fihetseham-po ananantsika ho an'Andriamanitra. Ny hira dia afaka maneho tahotra, finoana, fitiavana, fifaliana, fahatokisana ary fahatsapana hafa rehetra ananantsika eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.
Mazava ho azy fa tsy mitovy ny fihetseham-pony rehetra ao amin’ny fiangonana, nefa mbola miara-mihira. Ny mpikambana sasany dia maneho fihetseham-po mitovy amin'ny fomba hafa, amin'ny hira samihafa ary amin'ny fomba samihafa. Mbola miara-mihira ihany izahay. “Mifampahery amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny hira masina” (Efes 5,19). Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mihaona isika!
Ny mozika dia tokony ho fanehoana firaisana - na izany aza dia matetika no antony tsy fitovian-kevitra. Ny kolontsaina sy ny vondrona samihafa dia maneho ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny fomba samy hafa. Ny kolontsaina samihafa dia aseho saika isaky ny kaominina. Ny mpikambana sasany te hianatra hira vaovao; ny sasany dia te hampiasa ireo hira taloha. Toa samy tian'Andriamanitra daholo. Tiany ny salamo an'arivony; tiany koa ny hira vaovao. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny sasany amin'ireo hira taloha - ny salamo dia mandidy ny hira vaovao:
« Mifalia amin’i Jehovah, ry olo-marina; aoka ny mahitsy hidera Azy. Miderà an'i Jehovah amin'ny lokanga; mankalazà Azy amin'ny valiha tory folo. Mihirà fihiram-baovao ho Azy; milalao tsara amin'ny tady miaraka amin'ny feo falifaly!" ( Salamo 33,13).
Amin'ny mozikanay dia mila mandinika ny filàn'ny olona izay mety mitsidika ny fiangonantsika sambany. Ilaintsika ny mozika mahita fa misy dikany sy mozika izay mampiseho fifaliana amin'ny fomba ahafahan'izy ireo izany fa mahafaly. Raha mihira hira tiantsika fotsiny isika, dia midika izany fa miahy ny mahasoa ny tenantsika manokana isika noho ny an'ny olona hafa.
Tsy afaka miandry ny olona vao tonga amin'ny serivisy alohan'ny hanombohantsika mianatra ny hira sasany. Mila mianatra azy ireo isika izao mba hahafahantsika mihira azy ireo misy dikany. Saingy ny mozika dia lafiny iray amin'ny fanompoantsika ihany. Ny fanompoam-pivavahana dia mihoatra noho ny fanehoana ny fihetseham-pontsika fotsiny. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra koa dia mampiditra ny saintsika, ny fisainantsika. Ny ampahany amin'ny fifanakalozana antsika amin'Andriamanitra dia maka ny endriky ny vavaka. Amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra tafangona dia miresaka amin'Andriamanitra isika. Tsy ny tononkalo sy ny hira ihany no iderantsika azy fa amin'ny teny sy fiteny mahazatra. Ary io no ohatra ara-baiboly izay iaraha-mivavaka sy isantsika tsirairay avy.
Andriamanitra dia tsy fitiavana ihany fa fahamarinana ihany. Misy singa ara-pihetseham-po sy zava-misy. Ka mila ny fahamarinana ao amin'ny fotoam-pivavahantsika ary ahitantsika ny fahamarinana ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly no manam-pahefana lehibe indrindra antsika, izay fototry ny zavatra rehetra ataontsika. Tsy maintsy miankina amin'ity fahefana ity ny toriteny. Na ny hirantsika aza dia tokony hisaintsaina ny fahamarinana.
Saingy ny marina dia tsy hevitra manjavozavo afa-miresaka momba tsy misy fihetseham-po. Ny fahamarinan’Andriamanitra dia misy fiantraikany amin’ny fiainantsika sy ny fontsika. Mitaky valiny avy amintsika izany. Mitaky ny fontsika manontolo, ny saintsika, ny aintsika ary ny herintsika manontolo izany. Izany no antony ilazana ny toriteny ho an'ny fiainana. Ny toriteny dia tokony hampita ireo hevitra izay misy fiantraikany amin'ny fiainantsika sy ny fomba fijerintsika sy ny fihetsika amin'ny alahady, alatsinainy, talata, sns ao an-trano sy any am-piasana.
Ny toriteny dia tokony ho marina ary mifototra amin'ny Soratra Masina. Ny toriteny dia tsy maintsy ilaina, miatrika ny tena fiainana. Ny serivisy koa dia tokony ho feno fihetseham-po ary manafaka ny valiny avy ao am-po. Ny fiankohofantsika dia misy koa ny fihainoana ny tenin'Andrimanitra ary ny famaliana antsika amin'ny fibebahana noho ny fahotantsika sy ny fifaliantsika amin'ny famonjena omeny antsika.
Afaka mihaino toriteny ao an-trano isika, na amin'ny MC / CD na amin'ny radio. Betsaka ny toriteny tsara. Nefa tsy izany no traikefa feno amin'ny fanatrehana ilay serivisy. Amin'ny maha-endrika fanompoam-pivavahana azy, anjaran'ny fandraisana anjara ihany izy io. Tsy misy lafiny iraisana amin'ny fiankohofana ao am-piarahantsika mihira fiderana, mifamaly amin'ny Tenin'Andriamanitra, mifamporisika mba hampihatra ny fahamarinana eo amin'ny fiainantsika.
Mazava ho azy fa misy amin’ireo mpikambana eto amintsika no tsy afaka manatona ny fotoam-pivavahana noho ny fahasalamany. Diso ianao - ary fantatry ny ankamaroan'izy ireo izany. Mivavaka ho azy ireo isika ary fantatsika koa fa adidintsika ny mitsidika azy mba hiarahantsika mivavaka aminy (Jakoba 1,27).
Na dia mety mila fanampiana ara-batana aza ny kristiana any an-trano dia matetika izy ireo dia afaka manompo ny hafa ara-pientanam-po sy ara-panahy. Na izany aza, ny Kristianisma "mijanona ao an-trano" dia miavaka amin'ny filàna. Tsy tian'i Jesosy hanao izany ny mpianany izay mahay ara-batana.
Ny serivisy dia ampahany amin'ny fanompoantsika ihany. Ny Tenin Andriamanitra dia tsy maintsy miditra ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika mba hitaona ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny herinandro. Manova ny endriny ny fiankohofana, saingy tsy tokony hijanona velively izany. Ny ampahany amin'ny valin-tenantsika amin'Andriamanitra dia ny vavaka manokana sy ny fianarana Baiboly. Ny traikefa dia mampiseho fa tena ilaina tokoa amin'ny fitomboana izany. Ny olona maniry ara-panahy dia maniry ny hianatra momba an'Andriamanitra ao amin'ny Teniny. Maika er address izy ireo hamaly ny fangatahan'izy ireo aminy, hizara ny fiainany miaraka aminy, hiara-mandeha aminy, hahatsapa ny fanatrehany lalandava amin'ny fiainany. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia manohina ny fontsika, ny saintsika, ny aintsika ary ny herintsika. Tokony hanana faniriana hivavaka sy hianarana isika, fa na izany aza tsy anjarantsika dia mbola mila mampihatra izany isika.
Mampahatsiahy ahy ny torohevitra omena John Wesley izany taloha. Tamin'izay fotoana izay, hoy izy, dia manana fahatakarana ara-tsaina momba ny Kristianisma, saingy tsy tsapany ao am-pony ny finoana. Ka nanoro hevitra azy izy hoe: Torio ny finoana mandra-pahafatanao ny finoana - ary raha manana izany ianao, dia hitory azy tokoa! Fantany fa manana adidy hitory ilay finoana izy, koa tokony hanao ny andraikiny izy. Ary rehefa nandeha ny fotoana dia nomen'Andriamanitra izay tsy ampy izy. Nomeny azy ny finoana azonao tsapanao ao am-po. Izay nataony taloha dia noho ny fahatsapana adidy, dia izao no nataony. Nomen'Andriamanitra azy ny faniriany ilainy. Andriamanitra dia hanao toy izany ho antsika.
Ny vavaka sy ny fianarana dia antsoina indraindray hoe fifehezana ara-panahy. Ny "fifehezana" dia mety toa sazy, na zavatra tsy mahafinaritra tsy maintsy anerentsika ny tenantsika. Fa ny tena dikan'ilay teny hoe fifehezana dia zavatra iray mahatonga antsika ho mpianatra, izany hoe mampianatra antsika na manampy antsika hianatra. Nandritra ny taonjato maro, hitan'ny mpitarika ara-panahy fa manampy antsika hianatra avy amin'Andriamanitra ny hetsika sasany.
Maro ny fanao izay manampy antsika miara-mandeha amin'Andriamanitra. Mpikambana maro ao amin'ny Fiangonana no mahalala ny vavaka, fianarana, fisaintsainana ary fifadian-kanina. Ary azonao atao koa ny mianatra amin'ny fifehezana hafa, toy ny fahatsorana, ny fahalalahan-tanana, ny fankalazana na ny fitsidihan'ny mananotena sy kamboty. Ny fanatrehana serivisy koa dia fifehezana ara-panahy izay mamporisika ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. Azontsika atao ihany koa ny mianatra bebe kokoa momba ny vavaka, ny fianarana Baiboly, ary ny fahazarana ara-panahy hafa amin'ny alàlan'ny fitsidihana ireo tarika madinika ary ny fahitana ny fomba fanaon'ny kristiana hafa an'ireny karazana fanompoana ireny.
Ny tena finoana dia mitondra any amin'ny fankatoavana tena izy - na dia tsy mahafinaritra aza izany fankatoavana izany, na dia mankaleo aza, na dia mitaky fanovana ny fitondran-tenantsika aza izy io. Isika dia manompo azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, ao am-piangonana, ao an-trano na any am-piasana ary na aiza na aiza alehantsika. Mpikambana ao amin'ny vahoakan'Andrimanitra ary ny fianakavian'Andrimanitra dia manana fivavahana samirery sy an'ny besinimaro. Samy ilaina ny asan'ny fiangonana.
Manerana ny Testamenta Vaovao isika dia mahita mpitarika ara-panahy mampianatra ny hafa. Anisan’ny fomba fiaina kristiana izany; Anisan’ny iraka lehibe izany: “Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra ... ary mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo.” ( Matio 2 .8,1920). Ny tsirairay dia tsy maintsy ho mpianatra na mpampianatra, ary matetika isika dia samy miaraka. “Mifampianara sy mifananara amin’ny fahendrena rehetra” (Kolosiana 3,16). Tsy maintsy mianatra avy amin’ny tsirairay isika, amin’ny Kristianina hafa. Institiota fanabeazana ny fiangonana.
Hoy i Paoly tamin’i Timoty: “Ary izay renao tamiko teo anatrehan’ny vavolombelona maro, dia aoka izay olona mahatoky izay mahay mampianatra ny sasany koa.” (2. Timoty 2,2). Ny kristiana tsirairay dia tokony ho afaka hampianatra ny fototry ny finoana mba hanome valiny momba ny fanantenana ananantsika ao amin’i Kristy.
Ahoana ny amin'ireo efa nianatra? Tokony ho lasa mpampianatra ianao hizara ny fahamarinana amin'ny taranaka ho avy. Mazava ho azy fa be ny fampianarana avy amin'ny pasitera. Fa i Paoly dia mandidy ny Kristianina rehetra hampianatra. Ny vondrona kely dia manolotra fahafahana ho an'izany. Ireo kristiana matotra dia afaka mampianatra teny na ohatra. Azonao atao ny milaza amin'ny hafa ny fomba nanampian'i Kristy azy ireo. Raha malemy ny zavatra inoany, dia afaka mikatsaka ny fampaherezana ny hafa izy. Raha matanjaka ny zavatra inoany, dia afaka manandrana manampy ny malemy izy ireo.
Tsy tsara raha irery ny olona; Tsy tsara koa raha irery ny Kristianina. “Koa aleo miray roa toy izay irery; fa mahazo valim-pitia tsara izy noho ny fisasarany. Raha lavo ny iray amin'izy ireo, dia hanampy azy ny namany. Lozan'izay irery rehefa lavo! Dia tsy misy olon-kafa hanampy azy hitsangana. Na dia miara-mandry aza ny roa, dia mifampifanafana; ahoana no mahamay ny iray? Mety ho reraka ny iray, fa mahatanty ny roa, ary tsy mora tapahina ny tady intelo” (Mpitoriteny). 4,9- iray).
Afaka mifanampy hitombo amin’ny fiaraha-miasa isika. Ny maha-mpianatra dia matetika dingana roa, miaraka amin'ny mpikambana iray manampy mpikambana iray hafa. Saingy ny mpianatra sasany dia mikoriana bebe kokoa ary manana fifantohana mazava kokoa. Ao amin’ny Fiangonany, Andriamanitra dia namolavola olona sasany ho amin’izany tanjona izany: “Ary Izy nanendry ny sasany ho Apostoly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, mba ho voaomana ho amin’ny asa fanompoana ny olona masina. Izany no hanorenana ny tenan’i Kristy mandra-pahatongantsika rehetra ho amin’ny firaisan’ny finoana sy ny fahalalana ny Zanak’Andriamanitra, ka ho tonga olombelona tanteraka, ka ho feno ny fahafenoana ao amin’i Kristy” (Efesiana). 4,11- iray).
Andriamanitra dia manome mpitarika izay anjara asa dia ny fanomanana ny hafa amin'ny andraikiny. Ny vokatry ny fitomboana, ny fahamatorana ary ny firaisan-tsaina raha avelantsika hiroso araka ny fikasan'Andriamanitra ny fizotrany. Ny fitomboana sy ny fanabeazana kristiana dia avy amin'ny namana; ny zavatra sasany dia avy amin'ny olona izay manana andraikitra manokana ao amin'ny Fiangonana mampianatra sy maneho ohatra ny fiainana Kristiana. Ny olona mitoka-tena dia tsy mahita io lafiny finoana io.
Amin'ny maha fiangonana anay, dia liana izahay hianatra. Ny niarahanay ny hahalala ny marina momba ny lohahevitra maro araka izay azo atao. Tena te hianatra Baiboly izahay. Toa, toa lasa ny fahazotoana sasany toa very. Angamba izany dia ny tsy azo ihodivirana amin'ireo fanovana fotopampianarana. Saingy mila miverina amin'ny laoniny ny fitiavana mianatra hianarana isika taloha.
Betsaka ny azontsika hianarana - ary be dia be ny ampiharina. Ny fiangonana eo an-toerana dia tsy maintsy manolotra fampianarana Baiboly, kilasy ho an'ny mpino vaovao, mampianatra amin'ny fitoriana ny filazantsara, sns. Tokony hamporisika ny olona lainga isika amin'ny famoahana azy ireo, hampiofana azy ireo, hanome azy ireo fitaovana, hanome azy ireo fifehezana ary hisorohana azy ireo!
Ny fiarahamonina dia mazava tsara fa fisakaisan'ny samy kristianina. Mila manome sy mandray fiarahana isika rehetra. Tsy maintsy manome sy mandray fitiavana isika rehetra. Ny fivoriana ataontsika isan-kerinandro dia mampiseho fa zava-dehibe ho antsika ny fiarahamonina, na ara-tantara na amin'izao fotoana izao. Ny fiaraha-monina dia midika mihoatra noho ny firesahana amin'ny tsirairay momba ny fanatanjahantena, fifosana amin'ny vaovao sy ny vaovao. Midika izany fa mizara fiainana amin'ny hafa, fizarana fahatsapana, enta-mavesatra, fifankaherezana ary hifanampiana amin'ny sahirana.
Ny ankamaroan'ny olona dia manao saron-tava mba hanafenana ny filany amin'ny hafa. Raha tena te hifanampy isika dia tsy maintsy mifanakaiky kokoa vao mahita ao ambadiky ny saron-tava. Ary midika izany fa tsy maintsy manary kely ny saron-tavantsika isika mba ho hitan'ny hafa ny filantsika. Ny vondrona kely dia toerana tsara hanaovana izany. Mahafantatra olona bebe kokoa izahay ary mahatsapa ho voaro kokoa miaraka amin'izy ireo. Matetika izy ireo no matanjaka amin'ny faritra malemy ary isika dia matanjaka amin'ny faritra malemy. Izany no mahatonga antsika samy hatanjaka amin’ny fifanohanana. Na dia ny apostoly Paoly aza, na dia lehibe teo amin’ny finoana aza, dia nahatsapa fa nampatanjaka ny finoany tamin’ny alalan’ny Kristianina hafa (Romana). 1,12).
Tamin'ny andro taloha dia tsy nihetsika izany matetika ny olona. Ny fiarahamonina izay nahalalan'ny olona ny tsirairay dia mora kokoa ny mamorona. Saingy eo amin'ny fiaraha-monina indostria ankehitriny, ny olona dia tsy mahalala ny mpifanila trano aminy. Ny olona dia matetika misaraka amin'ny fianakaviany sy ny namany. Manao saron-tava mandritra ny fotoana rehetra ny olona, ​​tsy mahatsiaro tena ho azo antoka fa hampahafantatra ny olona hoe iza no ao anatiny.
Ny fiangonana tany am-boalohany dia tsy mila manasongadina tarika madinika - namboarin'izy ireo manokana. Ny antony tokony hanasongadinanay azy ireo ankehitriny dia niova be ny fiarahamonina. Mba hahafahana manangana fifandraisana interpersonal izay tokony ho ampahany amin'ny fiangonana kristiana, dia mila maka lalana izahay hamolavola fisakaizana / fandalinana / fizaram-bavaka kristiana.
Eny, mety ho fotoana izany. Tena mila fotoana mifanaraka amin'ny andraikitray kristianina izany. Mila fotoana ny fanompoana ny hafa. Mila fotoana ihany koa ahafantarana ny serivisy ilain'izy ireo. Fa raha nanaiky an'i Jesosy ho Tompontsika isika, tsy anjarantsika izany. Jesosy Kristy dia mitaky fitakiana amin'ny fiainantsika. Mitaky ny fanoloran-tena tanteraka izy, tsy ny Kristianisma sandoka.
Rehefa mitanisa ny "fanompoana" ho sokajy misaraka eto aho dia manasongadina ny fanompoana ara-batana fa tsy ny fampianarana. Ny mpampianatra koa dia iray manasa tongotra, olona iray izay mampiseho ny maha-zava-dehibe ny Kristianisma amin'ny fanaovana izay hataon'i Jesosy. Nikarakara izay nilain'ny vatana toy ny sakafo sy ny fahasalamana i Jesosy. Tamin'ny fomba ara-batana dia nanolotra ny ainy ho antsika izy. Ny fiangonana voalohany dia nanome fanampiana ara-batana tamin'ny fizarana fananana tamin'ireo sahirana, nanangona fanomezana ho an'ny noana.
Milaza amintsika i Paoly fa ny fanompoana dia tokony hatao ao anatin’ny fiangonana. “Koa dieny mbola manam-potoana isika, dia aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, fa indrindra amin’ny mino.” (Galatiana) 6,10). Ireo izay mitoka-monina amin’ny mpino hafa dia tsy manana zavatra amin’io lafiny amin’ny Kristianisma io. Ny foto-kevitra momba ny fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy dia tena manan-danja eto. Andriamanitra dia nametraka antsika tsirairay ho vatana iray "ho tombontsoan'ny rehetra" (1. Korintiana 12,7). Samy manana fanomezam-pahasoavana afaka manampy ny hafa isika tsirairay.
Inona avy ireo fanomezana ara-panahy anananao? Azonao atao ny manandrana izany mba hahitana azy fa ny ankamaroan'ny fitsapana dia miankina amin'ny traikefa anananao. Inona no nataonao taloha ka mahomby? Inona no heverinao fa tsara eo ianao? Ahoana no nanampianao ny hafa tamin'ny lasa? Ny fitsapana tsara indrindra amin'ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia ny fanompoana eo amin'ny vondron'olona kristiana. Manandrama anjara asa samihafa ao amin'ny Fiangonana ary anontanio ny hafa izay ataonao tsara indrindra. Misoratra anarana an-tsitrapo. Ny mpikambana tsirairay dia tokony hanana anjara farafahakeliny iray ao amin'ny fiangonana. Ary indray, vondrona kely dia fotoana mety tsara amin'ny asa fanompoana. Manolotra fahafahana maro ho an'ny asa izy ireo ary fotoana maro handraisana valiny momba izay ataonao tsara sy izay tianao.
Ny fiaraha-monina kristiana dia manompo an'izao tontolo izao manodidina antsika, tsy amin'ny teny ihany, fa amin'ny alàlan'ny hetsika izay mifanaraka amin'ireto teny ireto. Tsy niteny fotsiny Andriamanitra - nanao zavatra koa izy. Ny asan'ny asa dia afaka maneho fa ny fitiavan'Andriamanitra dia miasa ao am-pontsika amin'ny fanampiana ny mahantra, amin'ny fanomezana fampiononana ho an'ny malahelo, amin'ny fanampiana ny traboina hahitana dikany amin'ny fiainany. Ireo dia mila fanampiana azo ampiharina izay matetika mamaly ny hafatry ny filazantsara.
Ny serivisy ara-batana dia azo raisina ho tohanan'ny filazantsara. Azo jerena izany ho fomba hanohanana ny fitoriana filazantsara. Saingy ny serivisy iray dia tokony tanterahana tsy misy fepetra raha tsy manandrana miverina. Manompo fotsiny isika satria nomenay tombotsoa manokana Andriamanitra ary nanokatra ny masontsika hahalalantsika filàna iray. Nanome sakafo sy nanasitrana olona maro i Jesosy nefa tsy niantso azy ireo avy hatrany mba ho tonga mpianany. Nataony izany satria tsy maintsy natao ary nahita izay ilaina ahafahana mampihena izy.
"Mandehana amin'izao tontolo izao, ka mitoria ny Filazantsara" mandidy antsika i Jesosy. Raha ny marina dia manana toerana betsaka hanatsarana an'ity faritra ity izahay. Efa zatra mitazona ny finoantsika amin'ny tenantsika loatra isika. Mazava ho azy fa tsy afaka miova ny olona raha tsy antsoin'ny Ray izy ireo, saingy tsy midika izany fa tsy tokony hitory ny filazantsara isika!
Mba ho mpitandrina mahomby amin'ny hafatry ny filazantsara, mila fanovana kolontsaina ao anaty fiangonana isika. Tsy afa-po amin'ny mamela ny olon-kafa hanao izany isika. Tsy afa-po amin'ny fanakaranao olon-kafa ny hanao izany amin'ny radio na amin'ny gazety. Tsy diso ireo karazana evanjelistra ireo fa tsy ampy.
Mila endrika manokana ny fitoriana ny filazantsara. Rehefa naniry hafatra handefa hafatra ho an'ny olona Andriamanitra, dia nampiasa olona hanao izany izy. Naniraka ny zanany lahy, Andriamanitra, araka ny nofo, izy mba hitory. Maniraka ireo zanany izy, olona izay onenan'ny Fanahy Masina, hitory ilay hafatra ary hanome azy ny endrika mety amin'ny kolontsaina rehetra.
Tokony ho mavitrika sy vonona ary hazoto hizara ny finoana isika. Mila hafanam-po amin'ny filazantsara isika, hafanam-po izay hampita zavatra kristiana farafaharatsiny amin'ireo mpiara-monina amintsika. (Fantatr'izy ireo ve fa Kristiana isika? Toa hita fa faly amin'ny maha-Kristiana antsika isika?) Amin'izay lafiny izay dia mivoatra sy mihatsara isika, saingy mila fitomboana bebe kokoa.
Mamporisika antsika rehetra mba hieritreritra hoe ahoana ny tsirairay amintsika dia mety ho vavolombelona kristiana amin'ireo manodidina antsika. Mamporisika ny mpikambana tsirairay aho hankatò ny didy mba ho vonona hamaly. Mamporisika ny mpikambana tsirairay aho hamaky momba ny fitoriana filazantsara sy hampihatra izay novakiny. Afaka miara-mianatra sy mifampisaintsaina amin'ny asa tsara isika rehetra. Ireo vondrona kely dia afaka manolotra fiofanana ho amin'ny fitoriana filazantsara, ary ireo vondrona kely dia afaka manatanteraka tetikasa evanjely fotsiny.
Amin'ny tranga sasany dia afaka mianatra haingana kokoa noho ny mpitandrina ny mpikambana. Tsara izany. Dia afaka mianatra avy amin'ilay mpikambana ny pasitera. Nomen'Andriamanitra fanomezana ara-panahy isan-karazany izy ireo. Nomeny ny sasany amin'ireo mpikambana ato amintsika ny fanomezana ny fitoriana filazantsara izay tsy maintsy ho fohazina sy hitarika. Raha tsy afaka manome ity fitaovana ilaina ity ny filazalazana ny pasitera, dia tokony hamporisika ilay pasitera farafaharatsiny mba hianatra ilay olona ary ho ohatra ho an'ny hafa sy hanatanteraka ny fitoriana ny evanjely mba hitombo ny fiangonana manontolo. Amin'ity andiany enina anjara amin'ny asan'ny Fiangonana ity dia hitako fa zava-dehibe ny fanamafisana ny fitoriana filazantsara sy hanamafisana izany lafiny izany.